CompanyHub: CRM Software maka obere azụmaahịa gị | Martech Zone
Na usoro na ihe mgbochi na mmepe mmepe, anyị na-ahụ ọtụtụ nyiwe ndị ọzọ na-akụ ahịa. CompanyHub bụ obere azụmahịa CRM nke ahụ dị mfe ma nwee ike ịnye ọnụahịa nke na-agbada ka ị ga-enweta naanị ihe ịchọrọ.
Ewezuga visibil pipeline nke ire ahịa, CRM etinyere maka ire ahịa na-enye ikike iji gbanye usoro ntinye:
CompanyHub na-enye nke a ma nwee atụmatụ ndị a:
Jikwaa gị Web na-eduga ntughari
Na-enyere aka mee ka ire gị kwalite usoro.
Unlimited Email nsuso na njikọ clicks si Gmail.
Nnukwu ozi na nsochi Email.
Nchekwa onwe aro, yabụ na ị gaghị echefu ndu.
Ike Dashboard na Akụkọ Omenala
jikwaa Quotes na iwu ma ziga ozigbo site na sistemụ.
Gbalịa CompanyHub n'efu
Tags: auto na-esonnukwu ozi ịntanetịụlọ ọrụCRMomenala CRM akukoGmailgmail nsochiiwuokwu nkoogwe ahiapipeline ahịa